Ilayisi enamakhowe kanye ne-romanesco | Ukupheka Kwekhishi
UMaria vazquez | 06/03/2021 10:00 | Ungadliwa Kwemifino
Silungiselele izindlela zokupheka zelayisi eziningi futhi sizokulandela ngoba inhlanganisela yezithako ezingenziwa nalesi sithako njengoba i-protagonist ingapheli. Namuhla sibheja ngenye indlela elula, irayisi ngamakhowe kanye ne-romanesco. Iresiphi elungiselelwe kuphela izithako zezitshalo, ngakho-ke, ifanele ukudla kwe-vegan.
Sisebenzisa isizini ye-romanesco, sakha izitsha ezihluke kakhulu ekhaya ezifaka lesi sithako. Leli rayisi elinamakhowe kanye ne-romanesco lingenye yezinto ezilula futhi eziguquguqukayo kakhulu, ngoba liyakuvumela dlala ngezithako ezahlukahlukene, Ngaleyo ndlela uyivumelanisa ne-pantry yakho.
Ukhiye wale layisi ukusobho, engifake kulo u-anyanisi nopelepele, ngaphezu kwezithako eziyinhloko, amakhowe kanye neromanesco. Uma, njengami, ufuna ukwenza lula ipuleti, kuzofanele usebenze ngayizolo kuphela. Ngenze njalo ngahamba irayisi eliphekiwe ne-romanesco. Kuhlole!
Le rayisi yamakhowe eromanesco iyindlela enhle yonyaka. Isitsha esinothe ngezithako esifanele ukudla kwe-vegan.
2 bell pepper (okuluhlaza nokubomvu)
Amakhowe ayi-16 asikiwe noma aqoshiwe
Udeshi we-garam masala
Sipheka irayisi emanzini amaningi anosawoti, ingcosana yepelepele emnyama ne-turmeric. Uma sesiphekiwe, siyayihluza bese siyipholisa ngaphansi komsele wamanzi abandayo. Sabekisa.
Ngasikhathi sinye, kwesinye isitsha, sipheka i-romanesco kuma-florets. Cishe imizuzu emine noma ize ibe nokuthungwa okufunayo. Uma usuphekiwe, khama bese ugcine.
Epanini elikhulu lokuthosa sishisa izipuni ezintathu zamafutha omnqumo futhi susa u-anyanisi no-pepper oqoshiwe imizuzu engu-10.
Isizini bese ufaka amakhowe. Saute konke kuze kube yilapho amakhowe ethathe umbala.
Ngemuva sifaka i-romanesco, irayisi, izinsuku eziqotshiwe kanye nengcosana ye-garam masala. Pheka eminye imizuzu emithathu, uvuselele ngezikhathi ezithile ukuze konke kushise.
Siphaka ilayisi ngamakhowe kanye ne-romanesco eshisayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Izitsha » Ungadliwa Kwemifino » Ilayisi enamakhowe kanye ne-romanesco